Ama-ejensi Wezokuvakasha kanye nabeluleki: Khombisa Impumelelo
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » Ama-ejensi Wezokuvakasha kanye nabeluleki: Khombisa Impumelelo
Ezokuvakasha Ezitholakalayo • Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ukuqashwa kwezimoto • Ukuhamba ngesikebhe • Culinary • Amasiko • Imfundo • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu • Shopping • Sports • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Abathengi manje banezinketho eziningi kunanini ngaphambili zokubhuka amaholide abo. Imboni yezokuvakasha iyashintsha ngokushesha futhi nokuma isikhathi eside izimboni ezinkulu zivikelekile ekuguqukeni kwendlela yokuziphatha kwabathengi. Ukuze baphile, ama-ejensi wokuhamba ahlakaniphile kanye nabeluleki bakwazile ukucabanga ngaphandle kwebhokisi ukushaya ama-ejensi amakhulu okuvakasha aku-inthanethi (ama-OTA) anjenge-Expedia, iPriceline ne-Airbnb ngokunikeza amakhasimende abo izinsizakalo ezikhethekile kanye nokuhlangenwe nakho kwe-premium.
Izinzuzo zokwenza okuthile
Embonini yokuncintisana, ubuchwepheshe bunikeza osomabhizinisi abancane ithuba lokuqopha isikhala emakethe esivumela ukuthi bathuthuke. Ama-ejensi wokuhamba akhetha ukuhamba niche anezinzuzo ezinkulu.
Ama-ejensi wokuhamba nabeluleki kumele banikele ngokuthinta okungatholakali ngama-OTA amakhulu. Izimpendulo ezisheshayo emibuzweni, ukuxhumana ngqo nabasebenzela ukubhuka uma kwenzeka kuvela izinkinga, futhi iqembu elinolwazi konke kwakha ukuzethemba kumakhasimende asebenza nomhlinzeki wezokuvakasha onolwazi futhi onekhono.
Ngabathengi abakwazi ukubhukha okwabo ukuvakasha ku-inthanethi ngokuchofoza okumbalwa, ama-ejensi wezokuvakasha anganqoba ngokugxila ekunikezeni isipiliyoni, hhayi insizakalo kuphela. Ngokusebenzelana namakhasimende abo ezimweni ngamacala, izinhlaka ezikhethekile zingabona lapho zengeza khona inani nokunakekelwa okwengeziwe okubahlukanisa nezinkampani ezinkulu.
Lonke ibhizinisi lidinga ukulwela ukuba lihambe phambili emkhakheni walo. Ukwakha idumela njengenhlangano yezokuvakasha ekhethekile akuhlukile. Ngokusebenza ngobuchule ngokuma okuncane, ama-ejensi wezokuvakasha angaqinisekisa ukuthi asebenza ngokubambisana nozakwethu be-premium nabaqhubi bezokuvakasha ukuhlinzeka ngamaphakeji wokuhamba angcono kakhulu atholakala kumakhasimende abo.
Ulwazi, ukuzethemba, kanye nensizakalo yobungcweti enikezwa abasebenza ngokuvakasha okukhethekile konke kusiza ekwakheni ukwethemba kumakhasimende ukuthi bazothola okuhlangenwe nakho kweholide abakulindele. Futhi, amakhasimende anelisekile ngamakhasimende athembekile azobuyela kumeluleki wabo wokuhamba abathandayo.
Esikhundleni sokuzama ukumaketha konke kuwo wonke umuntu, ukugxila ku-niche eyodwa kwenza kube lula kuma-ejensi amancane okuhamba ukuqoqa ulwazi olunzulu angaludlulisela kuzethameli zamakhasimende ezikhethiwe.
Indlela enhle yokuthi ama-ejensi akhombise indawo yawo yobungcweti ngama-gTLD akhuluma ngokusobala akwenzayo.
Izizinda zokuhamba zibonisa ubuchwepheshe obuthile
Ama-ejensi wezokuvakasha kanye nabaqhubi bezokuvakasha basebenzisa amathuba e-gTLD ahlukahlukene ahlobene nokuhamba afaka .travel, .vacations, .tours nokunye okuningi. Lezi zizinda zinika amandla ama-niche travel opharetha ukukhombisa ngokusobala izethameli zabo ukuthi kuyini okukhethekile kwabo. Ukusebenzisa ama-gTLD afanele njengengxenye yokukhangisa kwabo kanye nobunikazi bezimpawu kusiza lezi zinkampani khulisa ukubonakala kwabo nokuseshwa ku-inthanethi.
Ukuhamba njengomndeni kungaba nomvuzo, kepha akunazo izinselelo zako. Ama-ejensi ahlinzeka imindeni ehambayo aqonda izindawo, amahhotela nezinkampani umndeni wonke ozozijabulela, ngenkathi uzisiza ukuthi zigweme noma yiziphi izingibe ezisendleleni.
Ukuvakasha komndeniIgama lesizinda seFamily Travel igama laso ngqo lebhizinisi, elisinikeza isisekelo esinamandla sokufaka uphawu lokumaka nemiphumela yosesho kubantu abafuna izixazululo zokuhamba komndeni. Kuyinkampani encane eqonda izidingo eziyinkimbinkimbi zabazali abahamba nezingane ezisukela ezinganeni ezisanda kuzalwa kuya kwentsha enzima ukuyijabulisa, kanye namaqembu emindeni ehlukahlukene enza ukuhlela uhambo ndawonye.
Le ejensi igxile ekuhleleni kohambo, ukuhamba ngezizukulwane eziningi nokuhlangana kabusha, izindawo zokuvakasha ezilungele umndeni nezindawo zokungcebeleka, ama-condos, amaholide e-Disney, kanye nohambo lwamaqembu amancane. Uma uhlela iholide njengomndeni, usesandleni esiphephile uma kuziwa ekuhleleni uhambo lwakho ne-ejensi yochwepheshe efana nalena.
Ukuvakasha: Le nkampani inikeza "amaholide e-adventure" emindeni yonke iminyaka. Amaphakeji abo akhiwe ngokuhlangenwe nakho okukhethwe ngokucophelela namahhotela anezingane engqondweni. Kukhona ukugcizelelwa kobumnandi nemisebenzi eminingi umndeni wonke ongabamba iqhaza kuyo, njenge-safaris, ukuvakasha kwe-tuk-tuk, ukuzingelwa kwabafuna ukudla, kanye namakilasi okupheka. Konke kunakekelwa kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, kususa konke ukucindezela kokuhlela nokuthutha ukuze imindeni ikwazi ukujabulela yonke imizuzu yeholide labo ndawonye.
Thekungu: Ukuhlangana kanye nokuhamba kungamagama angukhiye athandwayo abaseshi abawasebenzisela ukuthola izinketho zokuhlangana kwemindeni yabo. Usebenzisa ukuqondisa kabusha okubeka kakhulu kulawa magama angukhiye kunika amandla iRoyal Caribbean, omunye wemigqa yezikebhe enkulu kunazo zonke emhlabeni, ukuhlala phambili komncintiswano wabo kusesho lwezinto eziphilayo.
Ukuhamba Kwezidingo Ezikhethekile
Ezokuvakasha ezifinyelelekayo ziyimakethe ekhulayo, lapho ama-ejensi amancane abona khona ukuthi kunesidingo esikhulu sezinsizakalo zokuhamba ngobungcweti zabantu abanokuzwa okungaboni kahle, umbono, kanye nokuhamba.
Ukuhamba: Konke Ukuhamba kufana ncamashi negama laso lesizinda - ukuhamba kwawo wonke umuntu. Basebenza ngokuvakasha okuqinisekisa ukuthi abahambi abangaboni nababona bangalithokozela iholide lempilo yabo yonke.
Izindawo ezahlukahlukene namaphakeji aklanywa minyaka yonke, kugcizelelwa ukunethezeka, ukwelashwa okuqeqeshiwe nokwenziwe ngezifiso, nokukhethwa ngesandla kwabahlinzeki bezokuvakasha.
Ukuhamba.travel: I-TravAbility ingabameli bezokuvakasha ezifinyeleleka kalula, ezihlinzeka ngamathuba kubantu abakhubazekile ukuthi bahambe ngokushelela ezindaweni eziphezulu zomhlaba.
Umsebenzi wabo ukwenza lokhu:
"Khuthaza wonke amasiko omhlaba ukuthi abone ukukhubazeka njengengxenye ebalulekile yempilo, nokunikeza inkuthazo namathuluzi embonini yezokuvakasha ukuze ibavumele ukuthi bakhe izindawo ezifinyelelekayo ezenza ukuthi kufakwe ngendlela esimeme kwezomnotho."
Ukuhamba: Izandla inkampani ephethwe yisithulu enikezela ngezinkambo zokuvakasha emhlabeni wonke kubantu abasebenzisa ulimi lwezandla. Umsunguli wabona ukuthi kwakukhona igebe emakethe yezokuvakasha echwepheshe lapho ebona ukuthi izivakashi eziningi eziyizithulu ziveza imibono engemihle ngohambo lwazo.
Kusukela ekuqaleni kwayo okuthobekile, le ejensi ikhulisa ithimba layo futhi manje inikeza izinkambo emazweni angama-60. Kugcizelelwa ekunikezeni insizakalo ye-premium ngemihlahlandlela yolimi lwezandla, amaqembu amancane, kanye nokuhlangenwe nakho okuhlukile.
Nordic.cruises: Igama lesizinda lisho konke. Le nkampani igxile kohambo lwasolwandle oludabula iNyakatho Yurophu, iScandinavia kanye nesifunda saseBaltic.
Ngamaphakeji amaningi ahlukahlukene kanye nohambo oluqondiswayo ukuze luhambisane nesabelomali ngasinye, iNordic Cruises iyaziqhenya ngokuba ngumqhubi wezokuvakasha ohola phambili eSweden, eNorway, eFinland, e-Estonia naseRussia.
Ukuvikeleka.cruises: Le yinkampani encane yabayeni nabesifazane abangabalimi bemifino phakathi nezinyanga zasehlobo kodwa baphenduke abahleli bezokuvakasha abangochwepheshe nabahambeli bezikebhe lapho isimo sezulu siqala ukuphola.
Ngokuhlangenwe nakho kwangaphambilini embonini yezokuvakasha kanye nokuhlangenwe nakho kokuzihambela uhamba emazweni angama-30, uthatha ama-cruise olwandle angama-30, futhi ubheka zonke izifunda ezingama-50 e-USA, leli qembu elizinikele liyayiqonda imininingwane emihle yohambo engenza noma iphule iholide lamaphupho.
Okulindelwe.ukulimala: I-Expectations Cruises inezinketho ezingama-32,812 zokuhamba ngemikhumbi ezingama-612. Njengabahlinzeki abangochwepheshe, banganikeza abahambi nabathandi basolwandle iphakethe elihle lokuhamba ngezidingo zabo, kanye namadili omzuzu wokugcina kulabo abakhetha ukuphunyuka okuzenzekelayo.
Uma ufuna ukuphakamisa ubukhona bedijithali be-ejensi yakho yezokuvakasha bese uthola igama lakho lesizinda elifanele,thola futhi uthenge amagama wakho wesizinda ahlobene nokuvakasha ku-Travel.Domains.
I-Russia ingeza i-Italy entsha, iVietnam, i-Azerbaijan, iKyrgyzstan...
UNgqongqoshe Wezokuvakasha e-Jamaica Udabuke Kakhulu Nge-Trelawny...
Izindlela Ezi-6 Ezilula Zokuhlala Uphephile Ku-inthanethi - UnMask Nov
Indoda izama ukudubula isitimela sase-Japan esinesivinini esikhulu
Ubuchwepheshe bezindiza beNASA ukonga isikhathi sabagibeli bezindiza